Notsapainay tamin'ny takelaka | Androidsis
Alfonso de Frutos | | IFA, Lenovo, hevitra, Takelaka Android
Nihena ny varotra tablette. Ny fiakaran'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny efijery lehibe kokoa dia nanjary a mihoatra noho ny fihenan'ny fivarotana takelaka. Ny mpanamboatra sasany dia nanapa-kevitra ny hanadino ireo karazana fitaovana ireo. Tsy izany no izy Lenovo.
Ary ilay mpanamboatra aziatika dia nitondra fitaovana mahaliana ny IFA tany Berlin, ny Lenovo Yoga Tab 3 Pro, takelaka misy famolavolana tsara ary izay miavaka amin'ny projector pico matanjaka. Ary izahay dia mamakafaka azy amin'ny horonan-tsary ho anao.
1 Lenovo Yoga Tab 3 Pro, takelaka manatsara ny lesoka teo alohany
2 Toetra ara-teknika Lenovo Yoga Tab 3 Pro
3 Tetikasa pico matanjaka sy mahomby
Lenovo Yoga Tab 3 Pro, takelaka manatsara ny lesoka teo alohany
Tamin'ny herintaona Lenovo nanolotra ny Yoga Tab 2-ny ary nampiaiky volana anay ilay tetikasa kely nampiditra ilay takelaka. Ratsy loatra ny habeny tafahoatra, ny efijery dia 13 refy, nilanja ny varony. Izay tsy hitranga amin'ny Yoga Tab 3 Pro.
Ary hanombohana azy, ny takelaka Lenovo vaovao dia kely kokoa, ny efijery dia mirefy 10 santimetatra, ankoatry ny maivana sy azo tantanana kokoa. Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, ny Yoga Tab 3 Pro vaovao Misongadina amin'izany varingarina tokana itony izay sady manafina ny projector no manohana anay mandritra ny famoahana atiny. Fanatsarana miharihary izay mahatonga ny sary sy ny video ho mora kokoa.
Izy io dia vita tsara, famolavolana manintona ary mahasoa koa. Inona koa no mbola angatahintsika? fitaovana matanjaka ara-teknika. Ary efa nolazaiko anao izany Lenovo Tab 3 Pro dia takelaka misy fiasa tena mahaliana
Toetra ara-teknika Lenovo Yoga Tab 3 Pro
efijery 10 santimetatra misy vahaolana 2560 x 1600 sy 299 dpi
Fitaovana hafa pico projecteur afaka mamorona efijery 70-inch
Tetikasa pico matanjaka sy mahomby
Araka ny hitanao, ny fitaovana Lenovo Yoga Tab 3 Pro dia mahafeno tanteraka ny filan'ny mpampiasa rehetra. Andao hiresaka pico projecteur, ny singa mahaliana indrindra amin'ity takelaka ity.
Hanombohana azy, ny projecteur kely dia ampidirina ao anatin'io savily vita amin'ny varingarina io, miafina rehefa tsy ampiasaina. Ilay kinova vaovao mamela hamorona diagonaly 70-inchNa izany aza, aza manantena kalitao tsara amin'ny sary satria ny famirapiratana sy ny haavon'ny fifanoherana dia hisy fiantraikany betsaka amin'ny haben'ny tetikasantsika.
Miharihary Tsy azontsika ampitahaina amin'ny tetik'asa matihanina izany fa ny tena marina dia ny fiheverana voalohany dia tena tsara Ary mahita fampitaovana tena mahaliana tokoa izahay amin'ny sehatry ny asa sy ny matihanina, ankoatry ny fahafahany, ohatra, hampisehoana amin'ireo namantsika ireo horonantsary momba ny fialantsasatra ataontsika eo amin'ny rindrina an-trano.
Rehefa avy nandramana ny Lenovo Yoga Tab 3 Pro dia afaka milaza isika fa a takelaka izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha. Na dia marina aza fa ny projectoranao dia afaka manao zavatra kely alohan'ny matihanina, io dia mihoatra ny fanatanterahana ny asany ary manome plus ho an'ny takelaka izay manavaka azy mazava tsara amin'ireo mpanohitra azy.
Ny Lenovo Yoga Tab 3 Pro dia hanana kinova roa, iray mahazatra 499 euro no vidiny ary maodely miaraka amin'ny fifandraisana LTE izay hahatratra 599 euro. Ireo kinova roa ireo dia hahatratra ny tsena espaniola mandritra ny volana desambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Lenovo Yoga Tab 3 Pro, takelaka tena mahaliana miaraka amina projecteur pico
marcos73 dia hoy izy:
tsy manana 4gb, manana 2
Mamaly an'i marcos73
Jorgeleon dia hoy izy:
Firy ny lumine misy ny projet ????
Mamaly an'i Jorgeleon
Enga anie ny hery hiaraka aminao ao amin'ny Star Wars: Revolution